Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Njengoko omnye umenzi professional yehlabathi kunye kuluhlu olubanzi yonke consumables iprinta kunye nezinto ofisi, siya ndinebhongo xa wayedala iimveliso ezininzi ezintsha kwaye zisebenza. Neemfuno zeOfisi olunzulu kwaye ndizinikele ukuhlangabezana bonke bephela.
TIANSE na uhlobo iphambili izinto ofisi phantsi kwebhanile lwe Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Zibonisa-impumelelo iindleko, uyilo ezintsha, imibala abazizityebi kunye nokhetho ezahlukeneyo. TIANSE brand uye wangena ngokusesikweni imarike ukususela 2014, ngokukodwa ezisetyenziswa yoshicilelo ofisi, apho ithengiswa Tmall.com, JD.com kunye nezinye namaqonga e-commerce. Lube ngokukhawuleza a consumables yoshicilelo umthengisi brand okukhethwayo kwi kwimarike ye-commerce zasekhaya.
Ekubeni lemveliso egubungele 35,000 kunye nendawo yokugcina iyonke square e Huizhou mitha, warehouses ezintlanu ezinkulu eTshayina ukuya ku 10,000 yezikwere, 193 amaziko lenkonzo yomxhasi zobungcali kunye ngaphezulu kwe 2.300 ezishishina lwentsebenziswano kuzwelonke, inkampani onokuqinisekisa unikezelo fast nokufika ngexesha uze unike abathengi kunye ngenkonzo yobungcali kunye nokubonelela emva-intengiso, eqonda ngokwenene inkonzo enye.
R Strong & D wokuvavanya ulwazi lomfundi
Ekubeni iqela leengcali R & D, siqhoboshele kubaluleke kakhulu ezintsha kunye noyilo. Sihlonipha neengcamango zokuyila yaye ndizama ukwenza ezintsha kunye nokuphuculwa kwi iimveliso zethu.
Ngamava kushishino etyebileyo inkqubo engqongqo zokulawula umgangatho, siya kugxininisa kwakhona kwezo ukuzenza kunye nokwenza ukuzibophelela esinyanisekileyo ukuqinisekisa ukuba abaxumi bethu bafumana kuphela iimveliso aphezulu umgangatho.
Ngamatyathanga supply oluzinzileyo, ingqiqo yomthengi-ebomini yaye iqela lenkonzo yomxhasi wobungcali, siye libonelele-macala nolwazelelelo pre-yokuthengisa, ngo-yentengiso kunye neenkonzo emva kwentengiso kubo bonke abaxumi bethu lonke ixesha.